धनकुटा । धनकुटाको पाख्रिवासमा पहिलोपटक गोरु जुधाइँ प्रतियोगिता हुने भएको छ ।
स्थानीय युवाहरुको प्रयासमा यही माघ १ गते धनकुटाको पाख्रिवास नगरपालिका वडा नं. ७ मुगामा पहिलोपटक गोरु जुधाई प्रतियोगिता आयोजना हुन लागेको हो । सम्वतः यो प्रतियोगित पूर्वी नेपालमै पहिलोपटक आयोजना हुँदैछ ।
आयोजकले मुगाको गजेगैरीमा हुने सो प्रतियोगितामा सहभागी गराईने गोरुको इन्स्योरेन्ससमेत गराइसकेको छ । प्रत्येक वर्ष यसप्रकारको प्रतियोगिता गर्ने गरी योजना बनाइएको स्थानीय युवा नविन बराइलीले जानकारी दिए । प्रतियोगितामा सहभागी गोरुको मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ती दिन इन्स्योरेन्स गरिएको छ भने सिङ मात्रै भाँचिएका पनि क्षतिपूर्ती दिने आयोजकको भनाई छ ।
सो दिन सो स्थानमा माघी मेलासमेत लाग्ने छ । त्यसका लागि तयारी पूरा भइसकेको बताइएको छ । मेला सम्पन्न गर्न र प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न तत्कालीन मुगा गाविस वडा नं. १ का वडाध्यक्ष गोपाल विश्वकर्माको अध्यक्षतामा माघी मेला आयोजक समितिसमेत गठन गरिएको छ ।
मेला र प्रतियोगित सम्पन्न गर्न पाख्रिवास नगरपालिकाले ४० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ भने स्थानीय युवाहरुले ३० हजार रुपैयाँ आर्थिक संकलन गरेका छन् । प्रतियोगितामा प्रथम हुने गोरुले १५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छ ।